1.Free And Full version Lime Wire ( Software, Ebook, Songs, Movie, etc..မိမိ လိုချင်တဲ့ အရာမှန်သမျှကို Free Full Version ရအောင် ရှာပေးတယ့် Software လေးပါ။ ).2. My Driver ဆိုတဲ့ မိမိ စက်ထဲက Driver ရှာပေး တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေး .3.partition ပိုင်းတာအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆို Partition Manager.4-PCBoost faster Performance ~ ITmanHOME
14:12 Driver Total, နည်းပညာ 1 comment
1.Free And Full version Lime Wire ( Software, Ebook, Songs, Movie, etc..မိမိ လိုချင်တဲ့ အရာမှန်သမျှကို Free Full Version ရအောင် ရှာပေးတယ့် Software လေးပါ။ ).2. My Driver ဆိုတဲ့ မိမိ စက်ထဲက Driver ရှာပေး တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေး .3.partition ပိုင်းတာအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆို Partition Manager.4-PCBoost faster Performance
အချဉ်းကြိုက်တဲ့ ကျနော်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် သံပုရာသီးလေးလာပါပြီး...
ကျနော်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ မည်သည့် Software ပဲလိုချင်လိုချင် ဘာသီချင်းပဲလိုလို Free And Full version လိုက်ရှာရ အရမ်းခက်တယ့် ကျနော်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Lime Wire လို့ခေါ်ပါတယ် လက်ရှိကျနော်လည်း ဒီSoftwareလေးကိုပဲ အားကိုးနေရတာပါ။ သူက တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျ Software, Ebook, Songs, Movie, etc..မိမိ လိုချင်တဲ့ အရာမှန်သမျှကို Free Full Version ရအောင် ရှာပေးတယ့် Software လေးပါ။
...Full Version ရအောင် ရှာနေကြတဲ့ကျနော်သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်တော့ အလွန်ကို အသုံး ဝင်တယ့် Software လေးဖြစ်မှာပါ။ အသုံးလိုတယ့်သူများ အောက်ကလင့်တွေမှာ အဆင်ပြေမယ့် လင့်ကနေ ယူထားလိုက်ကြပါဦး။
mediafire ၌ Download ရန်
minus၌ Download ရန်
ကျနော်သူငယ်ချင်းတွေ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ဘာDriver တွေပျောက်နေတယ်။ ဘယ်Driver မရှိလို့ Ganeကစားမရဘူး နောက်ဆုံးတော့ဝင်းဒိုးအသစ်တင်လိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေမလာလို့ ဝင်ဒိုတင်ပြီးတောင် Driver တွေ ပျောက်နေတယ်..ဆိုသူတွေ အတွက်ပါ။
အခု ကျနော် မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ My Driver ဆိုတဲ့ မိမိ စက်ထဲက Driver ရှာပေး တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ကွန်ပျူတာထဲ ဒေါင်းလော့လုပ်ပြီး Install လုပ် Drivers တွေ ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါစေ။
ဒေါင်းလော့ လုပ်မယ့်သူငယ်ချင်းတွေအောက်ကလင့်တွေမှာ အဆင်ပြေမယ့် လင့်ကနေ ဒေါင်းလော့ လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ...
minus၌ Download ယူနိုင်ပါတယ်
mediafire၌ Download ယူနိုင်ပါတယ်
ဒီနေ့ညက ညီလေးတစ်ယောက်က သူ့စက်မှာ partition ပိုင်းတာအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆို ကျနော်ကို Gtalk ကနေလာပြောတာနဲ့ ကျန်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည် အဆင်ပြေအောင် ကျနော် ဒီsoftware လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. 107 MB ရှိပါတယ် ကျနော်လင့်တင်တာတောင် အချိန်နည်နည်းကြာသွားတယ် .......အခုမှ ပိုစ့်တင်ရတော့တယ်.
ကွန်ပြူတာတလုံးဝယ်လာရင် ပုံမှန်ဆို ဟာ့ဒစ်ကို C နဲ့ D လောက်ပဲ partitionဘဲခွဲထားပါတယ် ၊ နောက်ထပ်ပြီး ခွဲခြားချင်တဲ့သူများအတွက် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ် လိုအပ် ရင် ဒေါင်းယူလိုက်ပါ၊
... minus ၌ Downloadယူရန်
minus ၌ Downloadယူရန်
Credit all of Ko Lin :)
ဒီsoftwareကို ညွှန်းထားတာကတော့ ခပ်ကဲကဲပင် ဖတ်ကြည့်ကြပါအုန်ဗျ...
(With PCBoost your computer will run faster than ever before.Boost the performance of your PC the easy way.) မြင်သည့်အတိုင်းပင်။
ပြောမယုံ ကြုံမှ သိနိုင်အောင် Install လုပ်၍ သုံးကြည့်နိုင်ပါ၏။ သူငယ်ချင်းတွေ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်ဖို့ လိုင်စင်ပါ ထည့်သွင် ပေးထားပါတယ်။
အောက်က လင့်များတွင် Download လုပ်ယူပါ။
28 March 2013 at 04:37 Reply
Hі! Do you uѕe Τwitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm abѕolutely enϳoying your blog
аnd look forward tо new posts.
Alѕo visit my webρage :: criar Pagina profissional no facebook